प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भने– भारतको सांसदले हाम्रो अखण्डतामा चुनौति दिँदै बोल्ने ? « Janata Samachar
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भने– भारतको सांसदले हाम्रो अखण्डतामा चुनौति दिँदै बोल्ने ?
अब छिट्टै चीन जान्छु
प्रकाशित मिति : 13 May, 2018 12:13 pm
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय साँसद कीर्ति आजादको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ । भारतका केन्द्रीय सांसद अाजादले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी जनकपुर भ्रमणमा रहेकै बेला ट्वीटमा मिथिला भारतमा मिसाउनु पर्ने अभिव्यक्ति राखेका थिए ।
‘हाम्रो अखण्डतामा चुनौति दिँदै बोल्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार बिशेष सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ‘यस बिषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि कुरा भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली मोदीको भ्रमण विरुद्ध लाग्नेहरुप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो ।
‘केहीले मोदीलाई स्वागत नै गर्नु हुन्न भनेका थिए’ उहाँँले भन्नुभयो, विगतमा केही त्रृटी भए होलान । विगतमा त्रुटी भए भन्दैमा त्यसमा सुधार नै गर्न नखोज्ने ? विगतमा आपसमा लडेका उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया त वार्तामा आए । मिल्ने कुरा भएको छ । उत्तर कोरियासँग सत्रु मान्दै आएको अमेरिकाले पनि मिल्नको लागि वार्ताको तयारी गर्दैछ । हामीमा त्यस्तो के सत्रुता छ मिल्नै नहुने ?’
प्रधानमन्त्री अाेली माेदीकाे जनकपुर अभिनन्दन समाराेहमा प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अाफ्नाे सम्बाेधनमा संविधानमा विभेद भएकाे प्रसङ्रग उल्लेख गरेकाेमा असन्तुष्टि जनाउनु भयाे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले छिट्टै चीनको भ्रमण गर्ने जानकारी समेत गराउनुभयो । ओलीले दुवै छिमेकसँगको सम्बन्धलाई अझै सुमधुर र समृद्ध बनाउन आफूले भारतपछि छिट्टै चीनको भ्रमण गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।